I-AUD/JPY yooVimba-Funda ukuRhweba
tag: Aud / JPY
I-AUD / JPY iyaqhubeka nokudodobala, kwinqanaba leethagethi 77.42
Amanqanaba okuGxila aphambili78.00, 80.00, 82.00
Amanqanaba enkxaso aphambili: 58.00, 60.00, 62.00
Ixabiso le-AUD / JPY yexesha elide iTrend: Bearish
Nge-19 kaJulayi, Aud / JPY Iibini zawela kuma-80 eedola eziphantsi kwaye zaqala phezulu. Kwiveki ephelileyo, esi sibini besilungisa ngaphezulu. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso aphule ngezantsi kwenqanaba lama-80.00. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukuqhubela phambili kokuhla kwesibini. Okwangoku, nge-21 kaJuni ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwinqanaba le-2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-77.42.
Esi sibini siwele kwinqanaba lama-40 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba ikwi-downtrend zone kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge emazantsi zibonisa ukuhla.
I-AUD / JPY Umndilili wexesha eliphakathi: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini semali siwela ezantsi. Okwangoku, nge-26 kaJulayi ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini semali siya kuwela kwinqanaba 2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-78.32.
Isibini singaphezulu kwama-75% kuluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho wokuqhubela phambili. Ii-SMAs zijongela emazantsi zibonisa ukwehla.
Isibini se-AUD / JPY sikumhla wokuya ezantsi. Okwangoku, ilungisa phezulu ukuya kwinqanaba elinokwenzeka. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iyakwehla ukuya kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba lama-77.42.
tags Aud / JPY, Uhlalutyo lwamaxabiso
Umzabalazo we-AUD / JPY woKwaphula iZantsi kwiNqanaba lama-80.14, iDowntrend Inokwenzeka
Ukuhlaziywa: 20 Julayi 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: 78.00, 80.00, 82.00
Aud / JPY Isibini semali sihamba ezantsi njengoko ixabiso lifikelela kwinqanaba eliphantsi le-80.17. Umfutho we-bearish unokuqhubeka kwicala elisezantsi njengoko isibini sijongana nokwaliwa emva kokubuyiselwa kwenye indawo. Okwangoku, nge-21 kaJuni ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba isibini siza kuwela kwinqanaba 2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-77.28. Ukusuka kwinqanaba lentengo, isibini siwile kwaye safikelela kwinqanaba elisezantsi le-80.14.
Esi sibini siwele kwinqanaba lama-25 lamaXabiso aMandla aMandla aMandla ixesha eli-14. Ibonisa ukuba esi sibini ngoku sikummandla othengiswayo. Kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa kunokwenzeka ukuba luphele. Siza kujonga ngoku ukuvela kwabathengi kwingingqi ethe kratya yentengiso. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka emazantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini semali sijonge emazantsi. I-SMA yeentsuku ezingama-21 isebenza njengokuchasana nesi sibini. Okwangoku, nge-8 kaJulayi yedowntrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci ye-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini semali siya kuwa kwinqanaba le-2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-78.09.
Isibini singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba esi sibini sikwindawo ethe kratya. Abathengi banokuthi bavele kwindawo ethe kratya. Ii-SMAs zijongela emazantsi zibonisa ukwehla.
Isibini se-AUD / JPY sikumgangatho osezantsi. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iyakwehla ukuya kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci. Eli linqanaba 77.28 okanye 78.09. Imarike ifikelele kummandla ogqityiweyo. Isibini semali sinokuwela esiphelweni sokwandiswa kweFibonacci.
I-AUD / JPY ifikelela kuMmandla oGqithisileyo, ngoMeyi ukuhla ngakumbi
Ukuhlaziywa: 13 Julayi 2021
Aud / JPY Isibini semali sihamba ngendlela esezantsi. Ukudodobala kungenzeka kuqhubeke njengoko amaxabiso enyuka esiya kummandla othengiweyo wentengiso. Imakethi ngaphambili ibikhatyiwe kwinqanaba le-84.00. Okwangoku, nge-21 kaJuni ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwinqanaba le-2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-77.36.
Iibini ziye zehla zaya kwinqanaba lama-43 le-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba isibini sikummandla weDowndrend nasezantsi embindini wama-50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijike ngokuthe tyaba zibonisa ukuhamba ecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini semali sisawa. Isibini silungisa sinyuka sinyuka siphezulu ngaphambili. Isenzo sexabiso sibonisa imeko egqithisileyo yentengiso. Ngeli xesha, nge-30 kaJuni uptrend, umzimba wekhandlela othathwe kwakhona wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci ngama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini semali siya kuwa kwinqanaba le-2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-80.54.
Iimarike zingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ibonisa ukuba esi sibini sikwingingqi ethengiweyo. Abathengisi banakho ukuvela kwingingqi ethengiweyo. Ii-SMAs zijongela emazantsi zibonisa ukwehla.
Isibini se-AUD / JPY sisalungisa ngaphezulu njengoko sifikelela kwingingqi ethe kratya yentengiso. Ukonyuka kokujongana nokwaliwa kwinqanaba le-83.50. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iyakwehla ukuya kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba lama-80.54.
I-AUD / JPY ityhiliza ngaphezulu, kwinqanaba leethagethi 85.00 ePhakamileyo
Amanqanaba enkxaso aphambili58.00, 60.00, 62.00
Aud / JPY Isibini semali siwele kwinqanaba lama-82.40 emva kokukhatywa kwinqanaba le-85.00 yokuxhathisa ngaphezulu. Iimarike ziqala kwakhona phezulu ukuze ziphinde ziphinde ziphikisane kwakhona. Ngeli xesha, ngoJuni 25 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwinqanaba le-2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-87.53.
Iibini ziye zehla zaya kwinqanaba lama-45 le-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba isibini sikummandla weDowndrend nasezantsi embindini wama-50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijike ngokuthe tyaba zibonisa ukuhamba ecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini semali siphinde saqala ukuhla. Ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuJuni, esi sibini sachaswa njengoko intengiso yehlile ukuya kwinqanaba lama-25. Esi sibini siphinde saqala ngokutsha kodwa imarike isondela kwingingqi ethengiweyo. Okwangoku, nge-82.80 kaJulayi uptrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci ye-1%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini semali siza kuwa kwinqanaba le-38.2 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba 2.618.
Isibini se-AUD / JPY senza intshukumo ephezulu. Ukunyuka kunokwenzeka ukuba kujongwane nokwaliwa kwinqanaba lama-85,00. Isibini se-AUD / JPY siyawa emva kokujongana nokwaliwa kwinqanaba lama-84.16.
I-AUD / JPY kwiNdlela esezantsi, kwiNqanaba lokuLiwa kobuso kwi-84.00
Aud / JPY Isibini semali sihamba ngendlela esezantsi. Iimarike ngaphambili zazilungisa phezulu kodwa iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukophula ngaphezulu komphambili wangaphambili. Uxinzelelo lokuthengisa luqale kwakhona. Nge-18 kaJuni ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba isibini siza kuwela kwinqanaba 2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-77.31.
Iibini ziye zehla zaya kwinqanaba lama-42 le-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba isibini sikummandla weDowndrend nasezantsi embindini wama-50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijike ngokuthe tyaba zibonisa ukuhamba ecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini semali siphinde saqala ukuhla. Esi sibini sasikwindlela esecaleni. Ngomhla wama-28 kweyeSilimela i-downtrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci ngama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini semali siya kuwa kwinqanaba le-2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-83.34.
Iimarike zingaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwimeko ye-bearish. Kwakhona, esi sibini siwele kummandla weentengiso. Intsingiselo kukuba ukuthengisa uxinzelelo kufikelela kwi-bearish fisi. Ii-SMAs zijongela emazantsi zibonisa ukwehla.
Isibini se-AUD / JPY siyawa emva kokujongana nokwaliwa kwinqanaba lama-84.16. Ngokwesixhobo seFibonacci, isibini semali siya kuwela kwinqanaba 2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama-77.31
I-AUD / JPY yehla kancinci, Uptrend ngokunokwenzeka
Ixabiso le-AUD / JPY yexesha elide: Ukutshintsha
Imali ye-AUD / JPY isibini sihamba ecaleni kwicala elingaphantsi kwenqanaba lama-85.00. Imarike iyatshintsha ingaphantsi kwenqanaba 82.00 kunye nenqanaba 85.00. Intshukumo yamaxabiso ibonakaliswe ngeziphatho zezibane ezincinci zomzimba.
Esi sibini siwele kwinqanaba lama-37 kwi-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba isibini sikummandla weDowndrend nakwindawo engaphantsi embindini wama-50. Imakethi isondela kwingingqi ethengisiweyo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini semali senza intshukumo ephezulu. I-AUD / JPY iwele phantsi. Esi sibini sasikwindlela esecaleni, iibhere zaphula inqanaba lama-84.60 zaza zaqhubeka kwakhona ezantsi ngoJuni 16 ,. Imarike iye yehla kwinqanaba eliphantsi lama-82.40. Ngomhla kaJuni uptrend, umzimba wekhandlela obuyileyo uvavanye inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba .Isibini semali siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba lama-83.88.
Iimarike zingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho wokuqhubela phambili. Ii-SMAs zijongela emazantsi zibonisa ukwehla kwangaphambili.
Isibini se-AUD / JPY sishukumisela phezulu xa usiya ezantsi. Iimarike zikulungiso olusezantsi. Isibini se-AUD / JPY sinokufikelela kwinqanaba eliphezulu le-84.10 kodwa siya kujongana nokuchasana.
I-AUD / JPY ihleli ngezantsi kweNqanaba 85.50, Uptrend akunakulindeleka
Aud / JPY Isibini semali sihamba ecaleni. Esi sibini sitshintsha ngoku kuluhlu oluqinileyo phakathi kwamanqanaba angama-84.00 ukuya kuma-85.50. Ukuhamba okwangoku kuluhlu olubophelelayo kubonakaliswa yimizimba emincinci yeziphatho zezibane ezibizwa ngokuba ziiDoji Spinning top. Ezi zikhanyiso zibonisa ukuba abathengi kunye nabathengisi abawazi umkhombandlela wentengiso.
Esi sibini siwele kwinqanaba lama-55 kwi-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba isibini sikwindawo ephezulu kunye nangaphezulu kweziko lama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini semali sikumacala asecaleni kwinqanaba elingaphantsi kweedola ezingama-85.50. Esi sibini ngoku sitshintsha phakathi kwamanqanaba 84.40 kunye nama-85.00. Iibini zemali ziye zaguquka phakathi kwamanqanaba angama-84 kunye ne-85.50 zamaRandi. Ixabiso liyatshintsha apha ngezantsi nangaphezulu komndilili wokuhamba. Iibini ziya kuphakama xa ixabiso lingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo.
Iimarike zingaphezulu kwe-75% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho wokuqhubela phambili. Ii-SMAs zitshibilika ngokuthe tye zibonisa imeko esecaleni.
Isibini se-AUD / JPY sikwindlela esecaleni. Esi sibini sikhuphukela kwinqanaba lama-85.50. Ikhefu elingaphezulu kwenqanaba lokumelana liya kuthetha ukuphinda uqalise kwakhona. Ukuba ukunyuka okuphezulu kuyachaswa, kubonisa ukuba isibini siya kuqhubeka sibopha uluhlu lweentsuku ezimbalwa.
I-AUD / JPY iRange-Bound ibekwe ngezantsi kweNqanaba 85.50 yokuXhathisa
Aud / JPY Isibini semali sasikwangaphambili kwi-uptrend. Uptrend wapheliswa ngoFebruwari njengoko esi sibini saphinda sahamba ngendlela esezantsi kwinqanaba le-85.50. Ukusukela ngoFebruwari, isibini semali sihleli ecaleni kwendlela esecaleni kokuchasana kwinqanaba lama-85.50. Okwangoku, isibini semali siyatshintsha phakathi kwamanqanaba 84.00 kunye no-84.50.
Esi sibini siwele kwinqanaba lama-52 kwi-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba isibini sikwindawo ephezulu kunye nangaphezulu kweziko lama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini semali sikumacala asecaleni kwinqanaba elingaphantsi kweedola ezingama-85.50. Iimarike ziye zaguquka phakathi kwamanqanaba angama- $ 84 kunye ne- $ 85.50. Ixabiso liyatshintsha apha ngezantsi nangaphezulu komndilili wokuhamba. Iibini ziya kuphakama xa ixabiso lingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo.
I-AUD / JPY -4 Itshathi yeYure
Iimarike zingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwimeko ye-bearish. Ii-SMAs zitshibilika ngokuthe tye zibonisa imeko esecaleni.
Isibini se-AUD / JPY sikwindlela esecaleni. Ukusukela ngoFebruwari, imarike iye yaguquguquka ngaphantsi kwenqanaba lokumelana ne- $ 85.50. Okwangoku, isibini semali sidibanisa ngaphezulu kwenqanaba lama-84.00. Isibini semali kulindeleke ukuba sinyuke kwaye siphinde sibuyekeze
I-AUD / JPY ibambekile apha ngezantsi koLuhlu kwiNqanaba 85.20
Aud / JPY Iibini zemali ziye zathengisa ngaphantsi kokuchasana kwinqanaba le-85.20. Ukusukela nge-24 kaFebruwari, isibini semali sihambe ecaleni. Zonke iintshukumo zamaxabiso ngaphezulu koxinzelelo zitsala umva ngalo lonke ixesha imakethi ijongene nokuchasana. Namhlanje, intengiso inyuka ngaphezulu. Ngeli xesha, ngo-Epreli 29 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba lama-86.18.
Esi sibini siwele kwinqanaba lama-56 kwi-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba isibini sikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu kweziko lama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini semali sikumacala asecaleni kwinqanaba elingaphantsi kwe- $ 85.20. Ngomhla we-27 kaMeyi, esi sibini saphakama saphinda saphinda saphikisa kwakhona kwinqanaba lama-85.20. Oku kubangele ukwehla kwesibini semali. Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Meyi wenyusa umzimba wekhandlela ovavanyiweyo wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-28%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siya kunyuka siye kwinqanaba le-38.2 yokwandiswa kweFibonacci okanye kwinqanaba le-2.618.
Iimarike zingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho wokuqhubela phambili. Ii-SMAs zitshibilika ngokuthe tye zibonisa imeko esecaleni.
Isibini se-AUD / JPY sikwi-uptrend. Imakethi inyuka kwicala elingasentla ukuze iphinde ibuye kwakhona ukuxhathisa kwinqanaba lama-85.20. Isibini semali kulindeleke ukuba sinyuke siye kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba lama-86.35.
Phawula: U-Learn2.Trade akangomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lotyalo-mali lwakho iziphumo